FAMBOLEN-KAZO DIRMRS FIANARANTSOA – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
FAMBOLEN-KAZO DIRMRS FIANARANTSOA
Nandray anjara tamin’ny fambolen-kazo izay natao ny Zoma 29 Janoary 2021 ny mpiara-miasa DIRMRS Fianarantsoa. Hetsika ho fanamarihana ny fanokafana ny fambolenkazo ao anatin’ny Faritra Matsiatra Ambony, natao tao amin’ny Distrikan’Ambalavao Commune Rurale Iarintsena Fokontany Antsakaviro vohitra Ampelamatory.
Velarantany 20.000ha no norakofana tamin’izany ka nambolena zanakazo 20.000. Nentanina ihany koa ny hikojakojana ireo hazo voavoly.
Fampitam-baovao: DIRMRS Fianarantsoa
← Nivahiny tao amin’ny Fandaharana ADY HEVITRA tao amin’ny Televiziona Malagasy ny Zoma 15 Janoary 2021 Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA, Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika.
FAMBOLEN-KAZO DIRMRS TOLIARA →